पहिलो पटक पोखरा, रित्तै हात ,(बासु श्रेष्ठ)
काठमाण्डौँको रैथाने म देशका विभिन्न ठाउँ र कतिपय विदेशमा पुगीसकेको भएता पनि काठमाण्डौँबाट २०२ किमी पश्चिम उत्तरमा रहेको रमणीय, लोकप्रिय पोखरा भने सन् २०१३ सम्मपनि पुग्न पाएको थिईन । मेरो धेरै बाल्यकाल तराईमा बित्यो । जनकपुरका विभिन्न गाउँहरुमा हुर्किँदै एसएलसी जनकपुर धामबाट २०३२ मा पास गरेँ । बुवाको जागीरसँगै रौतहटको सदरमुकाम गौरमा २०३३ सालमा मेरोपनि सरुवा भयो । र बेलाबखत गौर काठमाण्डौ गरेपनि २०३८ सालमा सदाकोलागी काठमाण्डौँ फर्किएपछिपनि विभिन्न कारणवश पोखरा पुग्ने जुरेकै थिएन । त्यसो त पोखरा पुग्न मरिहत्ते कोशीश गरेको पनि थिईनँ । तर जाने लालसा भने जिउँदै र ताजै थियो ।
यता अमेरिकामा नेपालको बारेमा अनभिज्ञहरुलाई सगरमाथाको देश भनेर चिनाउँदा ‘ओ...तैँले सगरमाथा कतिपटक चढिस् त’ या ‘सगरमाथा तेरो घरको झ्यालबाट देखिन्छ ?’ भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् । मानौँ सगरमाथा कुनै एक ढिस्को हो र यसको वरपर मानव बस्ती छ । अनि हामी दिनदिनै यसमा तलमाथी गरेर खेल्छौँ । यिनिहरुको थप अनजानपन देखेर आफुलाई दया त लाग्छ नै, मनमनै ‘पोखरा त पुग्न सकेको छैन मैले, कताको सगरमाथा चढ्नु नि पनि भन्थेँ ।’
जे होस् सन् २०१३ मा नेपाल गएको मौकामा समय जुराईयो । काम विशेषले नेपाल गएको भएपनि साहित्यिक भेटघाटमा मेरो समय वित्न थालेको देखेपछि घरपरिवार र श्रीमतिले होईन, हामीलाई समय दिन्नौ भनेर घुर्कीपूर्ण असन्तुष्टि देखाए । श्रीमतिलाई फकाउँदा पोखरा जाने रहर निकालिन् । मैले हवस् भनेर तत्काल स्विकारेँ ।
यसरी तत्काल स्विकार्नुको अर्को कारणपनि थियो । तत्कालिन शानेवानीको अर्थ विभागमा सँगै काम गरिसकेको मित्र महेश मोक्तान पोखराको डिस्ट्र्क्टि मैनेजर भएर पुगेका रहेछन् । अफिसले दिएको क्वार्टरमा कोठा खाली रहेको र महेशले आउने भए आईज भनेर केहि दिन अघिको भेटमा भनेको थियो । यता श्रीमतिको माग स्विकार गरेपछि महेशलाई कहाँ कसरी आउने भनी सोद्धा उनले नै बसको टिकटको व्यवस्था गरिदिए र जमलबाट बस चढियो पोखरा र माछापुच्छ्रेको दर्शन गर्न ।
त्यसो त हवाईजहाजबाट गए समयको बचत निकै हुने थियो । तर खल्तीको बचत हुने थिएन । अर्को कुरा दृश्यावलोकनकोपनि बचत हुनेथियो । म यसको अति लोभी । आँखा झिमिक्क नगरी झ्यालबाट दृश्यावलोकन गर्न मलाई असाध्य आनन्द लाग्छ । त्यसैले आफुलाई त्रिशुली नदीको छेउछेउ बगेको पृथ्वी राजमार्गमा कुदेको बसबाट आँखा बाहिर फाल्दै गुड्न मन थियो । दाँयाबायाँका दृश्यपान र बेला बेलाको चियापान र खानपान गर्दै जान छोडेर चढ्न पाको छैन ओर्लन पर्नेगरी प्लेनमा के जानु भनेर बसको यात्रा थालिएको थियो ।
जमलबाट आठ बजे बस हिँड्यो । एकैचोटि कलँकीमा रोक्यो अनि त्यहाँबाट थानकोट नागढुँगा हुँदै बस सुलुलुलुलु गर्दै नागबेली खेल्न थाल्यो । त...ल पहाडको काखीमा सर्प झैँ देखिने सडकमा किरा झैँ लाग्ने बस, ट्र्क, कारहरु जन्ती झैँ लामबद्ध भएर आउने जाने गरिरहेको देखिईन्थ्यो । बस भीरको छेउमा पुग्दा झ्यालबाट देखिने अथाह गहिराईमा यो बस गुल्टियो भने ? भन्ने जस्ता तर्कनाहरु बेलाबखत मनमा आउँथे र आँखालाई बसभित्र ल्याएर किताव पढ्नेतर्फ ध्यान मोड्थेँ ।
नागढुँगाबाट भने सडकको विजोग रहेछ । न मर्मत छ, न सम्भार छ । खल्ड्याँग र खुल्डुँग, गल्ड्याँग र गुल्डुँग भएको सडक रहेछ । भर्खर खोलिएको ट्रयाक जस्तो । सडक भन्नुपनि सडकको बेईज्जत हुने थियो । तर मैले यसमा नेपाल सरकारको बेर्ईज्जत देखेँ । काठमाण्डौँलाई देशका अन्य दक्षिणी भागहरुसँग जोड्ने एकमात्र सम्पर्क मार्गको रुपमा रहेको यो त्रिभुवन राजपथले काठमाण्डौँको आर्थिक विकासमा कति टेवा दिएको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यो सडक बन्द हुनेवित्तिकै काठमाण्डौँ कति अव्यस्थित हुन जान्छ हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्छौँ र बेलाबखत भोगेकापनि छौँ ।
एकछिन नविराई ओहोर दोहोर गरिरहेका गहौँ सामान बोकेका ट्र्कहरुले काठमाण्डौँको अर्थ व्यवस्था र जिविका कसरी धानी रहेको छ भन्ने प्रष्ट देखाउँथ्यो । तर तिनै ट्र्क आउजाउ गर्ने यो बाटोको अवस्था देखेर भने सरकारप्रति मेरो उदासिनता जाग्यो । अमेरिका फर्किएपछि त्यस सडकको मर्मत सम्भार हुन लागेको छ भन्ने पढेको थिएँ । कत्तिको सत्यता थियो त्यस समाचारमा कुन्नी अहिलेका भुक्तभोगी नै जानुन् ।
जे होस्, पोखराकोलागी हिँडेको बसले दशबजेतिर खाजा, बाह्रबजेतिर लन्च खुवाउँदै यात्रा जारी राख्यो । बेला बेला सिटमा पानी चुहिएर यो कुना र त्यो कुना गर्नुपरेको थियो । बाहिरबाट हेर्दा सलक्क र चिल्लो देखिने बस त पानी परेको बेलामा चुहिने हुँदो पो रहेछ । सुकुल गुण्डो रहेछ बस त । उता बसको नाम भने कोच दिइएको थियो । शायद जस्तोसुकै र जेसुकै गरेर यात्रीलाई ठगेर भएपनि पैसा आफ्नो खल्तीमा कोच् भन्ने आशय थियो क्यारे बसधनीको । तर पोखरा घुम्ने धुनमा यस असुविधालाई मजैले नमजा मानेपनि उपाय नास्ती भनेर बेहोयौ हामीले । झण्ड्रै अपरान्ह चारबजेतिर पोखरा एयरपोर्ट नजिक रहेको नेपाल वायुसेवाको अफिसनिर ओर्लियौँ ।
पोखरा उपत्यकामा बस प्रवेश गर्ने वित्तिकै मैले माछापुच्छ्रे खोज्न थालेँ । दायाँ बाँया, अगाडी पछाडी चारैतिर आँखा घुमाएँ । तर अहँ माछापुच्छ्रे कालो र नीलो बादलभित्र कुन कुनामा लुकेर बसेको थियो कुन्नी । कतै देखिएन । साहित्यका लेख रचना, गीत, कविता, गजलमा सुन्दै पढदै आएकोले मेरालागी आकर्षक बनेको माछापुच्छ्रे दर्शनीय भएर मेरोलागी तिर्षना भयो । तर ठिक छ, आज नभए भोली या पर्सी त देखिई हाल्छ नि भनेर मैले चित्त बुझाएँ ।
पोखरा एयरपोर्ट नजिकै रहेको महेशको अफिसनिर ओर्लिएपछि सुटकेश घिसार्दै महेशको अफिस पस्यौँ । त्यहाँ बसेर चिया खाने जमर्काेका बिच हामी एकैसाथ २०४३ सालमा निगममा भर्ति भएको साथी देखा परिन् । अचम्म र खुशी एकैसाथ तँछाड मछाड गरे । तिनलाई झण्डै एक्काईस वर्षपछि भेटेको थिएँ । यताको चलन अनुसार अँगालो हाल्न या भनौँ हग गर्न मन लाग्यो । तर त्यताको सँस्कृति जसमा म आफैं हुर्किएको थिएँले रोक्यो र मेरा पाखुरा र छाती त्यत्तिकै सगबगाएर चुप लागे । यो अँगालोमा आत्मियता र सहृदयताको पोको हुन्थ्यो तर सबै सँस्कृति सबै ठाउँमा एकैनासले लागु हुन्न भन्ने कुरा मैले बुझेकोले रोकिएँ ।
महेशको कार्य व्यस्तता देखेर मैले कोठा कति टाढा छ, हामी जाँदै गर्छौं भनेपछि उनले एक सहयोगीको साथ लगाएर ट्याक्सीमा पठाए । कोठामा हातमुख धोएर फ्रेस भएको एकघण्टापछि महेश आए र हामी घुम्न निस्कियौँ ।
महेशले फेवातालको छेवैछेउ पैदल नै पैदल हिँडाएर ताल वाराही मन्दिरको दर्शन गर्न डुँगा चढ्न पुर्र्याए । डुँगा चढ्न लागेको बेलामा काठमाण्डौँबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालिन उपकुलपति गँगा दाईले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो “प्रतिष्ठानले तपाईसँग भेटघाटको आयोजनाको मिति मे २४ कादिन तय गरेको छ । समयमा पुग्नुहोला’’ भन्नुभयो । एक हप्ता अघिमात्र अर्थात मे १६ कादिन यलमाया केन्दको कार्यक्रममा तत्कालिन कुलपति वैरागी काईला दाइसँग कमल दाई अर्थात कमलमणी दिक्षितले भेट र चिनजान गराई दिनुभएको थियो । त्यसबेला वहाँले भन्नुभएको थियो “प्रज्ञा प्रतिष्ठानले बाहिरबाट आएका साहित्यकारहरुसँग भेटघाटको कार्यक्रम राख्ने गरेको छ । म कुरा गरेपछि तपाईलाई खबर गरौँला ।” गँगा दाईको यो फोन यसैको निरन्तरता थियो । फेरी गँगादाईसँग भने अमेरिकामा आउनुभएको मौकामा मैले खसखस डटकमकोलागी अन्तर्वार्ता लिई सकेको नातालेपनि चिनजान थियो ।
गँगा दाईलाई हस् भनेर फोन राखेपछि त्यसदिनकोलागी अन्तिम डुँगाबाट ताल वाराही मन्दिर गई दर्शन गरेर फर्कियौं । १५ वर्ग किमीमा फैलिएको विशाल तालको विच यसरी मन्दिरको निर्माण कसले र के प्रयोजनले गरेको होला भन्ने प्रश्नहरुले मनमा हुत्ति खेले । तर उत्तर खोज्न कताको दक्षिण फर्किनु र ? जे होस् पौडी खेल्न नजान्ने म र श्रीमतिले केहि त्रास र भयकासाथ यो छोटो जलयात्रा पुरा गर्यौं । श्रीमतिले त के सोचेकी थिईन् कुन्नी मैले भने यात्रीकोलागी सुरक्षाकोलागी लाईफ भेष्ट लगाउन दिएको भए बढि सुरक्षित हुन्थे कि भन्ने सोचेँ । कथम डुँगामा कुनै गडबडी या डुँगा खियाउनेलाई केहि भएमा १०-१२ फिट गहिरो तालमा जलयात्रीको विजोग हुने अवश्यम्भावी छ । तसर्थ यस्तो दुर्घटना हुनुभन्दा पहिले नै सुरक्षाका माध्यमहरु अपनाए दूरदर्शिता झल्किने थियो ।
फर्किँदा बाटोमा थकाली खाना खाईयो । निकै नाम सुनेको यो थकाली खानाका रेष्टुरेण्टहरु लहरै थिए । हामी नेपालीहरुमा एउटाले केहिमा सफलता पायो भने त्यसको नक्कल गर्नेहरु बग्रेल्ती देखा पर्छन् । यो थकाली खाना व्यवशायको नक्कलपनि यसैको उदाहरण हो । काठमाण्डौमापनि एकै ठाउँमा थकाली रेष्टुरेण्टको लहर धेरैपटक देख्न भ्याएको थिएँ । जे होस् आजको पोखराको पहिलो दिन यसरी टुँगिएको थियो ।
भोलीपल्ट अर्थात मे २१ कादिन महेश विहानै अफिस हिँडिसकेका थिए । हामी दुईजना आफ्नै ढँगले घुम्न निस्कियौँ । डेभिड फल्स, न्युरोड बजार, विन्ध्यावासिनी मन्दिर गयौँ । डेभिड फल्स सुकेर तुर्तरे धारा भएको रहेछ । शायद वर्षातमामात्र फल्स हुन्छ होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । मचाहिँ माथिको डाँडाबाट सानो डोरेटो हुँदै पातले छाँगो आएको तर्फ गएँ र देखेँ अलि माथि मानिसहरु लुगा धुने र नुहाउने गरिरहेका थिए । मलाई अलि अचम्म लाग्यो । फर्किँदा पातले छाँगोको अफिसमा त्यसबारे जानकारी लिँदा उनीहरु खासै सजग या चिन्तित देखिन्नथे । त्यहाँबाट गुप्तेश्वर महादेवलाई परैबाट हेरेर बस चढेर फर्कियौँ ।
महेन्द्र गुफा जान विन्ध्यवासिनी मन्दिर छेउबाट एउटा ट्याक्सी लियौँ । पोखराको ट्रयाक्सीमा मीटर नहुने रहेछ । मलाई लाग्यो मीटर नै नभएकोलाई कसरी ट्याक्सी भन्ने ? पाँचशयमा महेन्द्र गुफा र चमेरे गुफा पुर्याएर फर्काउने तय भयो । ट्याक्सी ड्रईभरसँग मीटर नहुनाको कारण बुझ्दा नापतौल विभाग र ट्याक्सी चालकहरुको विच जुँगाको लडाई रहेछ । एकार्काले भनेको नमानेर यो सेवा व्यवस्थित र विश्वासिलो हुन नपाएको रहेछ । परिणाम स्वरुप प्रयोगकर्ताहरु मारमा परेका छन् ।
महेन्द्र गुफाभित्र पस्दै जाँदा एक मिनेट नहिँड्दै देउतास्थान बनाएर एकजना पुजारी बसेको ठाउँमा पुगेपछि गुफाको यात्रा टुँगिदो रहेछ । टिका लगाएर दक्षिणा चढाएर युटर्न हान्नुपर्ने रहेछ । मैले भर्जिनीयामा देखेको लुरे नामको गुफाको दाँजोमा यो महेन्द्र गुफा पो लुरे रहेछ । खास्सै प्रभावित नभईकन फर्कियौ र चमेरे गुफातर्फ लाग्यौँ ।
चमेरे गुफाको टिकट काटेर भित्र पसियो । केहि भित्र पसेपछि दाँया दाँया पारेर ठाडो डाँडो जस्तो उक्लिनु पर्ने रहेछ । माथि देखिने सानो प्वालमा पुगेर त्यसबाट बाहिर निस्कनु पर्ने रहेछ । प्रशस्त उज्यालोको अभावमा चट्टानका भागहरु समाउँदै माथि उक्लनु पर्ने रहेछ । चिप्लिएर तल खस्ने त्रासमा शरीर लगलग कामी सकेको थियो । भीरको चिचिण्डो भैसकिएको थियो । किनभने ओर्लिएपनि उत्तिकै डर, माथि उक्लिएपनि उत्तिकै डर । यै भीरमा हामीभन्दा अगाडि पुगेका भारतीय पर्यटकको १०-१२ वर्षकी छोरी आत्तिएर व्हाँ व्हाँ रोईरहेकी थिईन् । बाबुआमा जड भएर निरुपाय बनेका थिए । तर छोरीलाई फकाउँदैपनि थिए । हामी आफुपनि आत्तिईसकेका थियौँ । चढ्न अप्ठ्यारो भएको टुप्पामा बसेर तलकालाई हात दिँदै माथि तान्ने पूण्य काम एकजना भाईले गरिरहेका थिए । तिनि गुफाका कर्मचारी थिए वा हामीजस्तै पर्यटक थिए, त्यहाँबाट निस्कने धुनमा बुझ्नै पाईएन । जे होस्, तिनका सहायताबाट माथि उक्लिएपछि साँगुरो प्वालमा आफुलाई छिराएर घस्रँदै, कोल्टे पर्दै सर्पले दुलोबाट टाउको निकाले झै हामी दुबै जमिनमा निस्कियौँ । बाफ् रे बाफ । नयाँ जीवन पाए जस्तो, ठुलो विपतबाट बचे जस्तो अनुभव गरियो । शरीर थरथर कामी रहेको थियो । लुगाहरु मैला भएका थिए । यो कस्तो एडभेन्चर हो आफ्नो शरीरलाई सास्ती दिएर रमाईलो मान्ने? फेरी गुफाको व्यवस्थापन अफिसले यो यात्रालाई अझ व्यवस्थित र सजिलो बनाउन सक्थ्यो होला, यसरी किन नगरेको होला भन्ने तर्कनापनि लाग्यो । केहि नबोली हामी ट्याक्सी रोकेतर्फ जाँदै थियौ । फर्कन ढिलो भएकोले ट्याक्सी ड्रईभर हामीलाई खोज्दै गुफातिर आउँदै रहेछ । त्यहाँको व्यवस्थापनतर्फ उनकोपनि असहमति रहेछ । उनलेपनि दुखेसो पोखे । मैले थप जान्ने मौका पाएँ र मेरो सोचाईमा बल थपियो ।
त्यहाँबाट पोखराको नयाँ सडक एक छेउबाट अर्को छेउ त्यत्तिकै दाँयाबाँयाका रमिता र पसलहरु हेर्दै हिँड्यौँ । एकठाउँमा भर्खर खोलिएको रेष्टुरेण्ट थियो क्या रे बाहिरबाट हेर्दा सफा र चिटिक्क देखिन्थ्यो । यहाँ वाईफाई सिँत्तैमा पाईन्छ भन्ने सूचना पढेपछि ईण्टरनेट र स्मार्टफोनले हाईफाई भएको यो ज्यान भित्र पसिहाल्यो । किनभने हातमा भएको फोन नचलाएको केहि दिन भैसकेको थियो । फोन र डाटाप्लान नभएपछि यो त कामै नलाग्ने डल्लोमात्र पो हुँदो रहेछ । जेहोस् भित्र पसेर कफि अर्डर गर्दै पैसा तिर्न लाग्दा तीनछक परेँ । झण्डै १०० मिली लिटर अट्ने एक कप कफिको साठी रुपैँया पर्ने रहेछ । अरु सबैले धमाधम पैसा तिर्दै अर्डर गरेको देखेर यो महँगोको अनुभव मलाईमात्र भएको होला भन्ने मनमनै ठान्दै लाजपनि मानेँ । हुन त अमेरिकी डलरको हिसाब गर्ने हो भने साठी सेण्ट थियो । त्यो साठी सेण्ट भनेको भए मेरोलागी यस्तो बज्रपात हुने थिएन । तर पैसाको भोल्युम थाहा पाएर म आत्तिएको थिएँ । नेपालको बजारको भाउ बेसाहा सुनेर म धेरै पटक तर्सने गरेको छु ।
कफी अर्डर गरेर एउटा टेबलमा बस्दै पाएको वाईफाईको पासवर्ड हालेर सबैभन्दा पहिले ईमेल चेक गरेको त कमलमणी दिक्षितको एउटा ईमेल आईरहेको रहेछ । कथाकार सुन्दर जोशीको 'क्यासल रककी अप्सरा' कथा सँग्रह मदन पुस्तकालयमा दर्ता भयो भन्दै सुन्दर जोशीका कथाको बयान गर्दै उनलाई लेखिएको ईमेलको कपी मलाईपनि आएको रहेछ । खसखस डटकममा प्रकाशित भैसकेका ति कथाहरुको बारेमा कमलमणी दाईको विचार पढ्न पाउँदा खुशी लाग्यो । मैले त्यहिँबाट अमेरिकाको फ्लोरिडा भएका सुन्दरजीलाई भाईबरबाट फोन गरेर जानकारी दिएँ । उनीपनि साह्रै खुशी भए । आफुले गरेको काममा म आफैँ एकछिन मख्ख परेँ ।
त्यहाँबाट हामी लाग्यौँ घरीपाटनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय सँग्रहालयको अवलोकन गर्नकोलागी । झण्डै ४५ मिनेटको बाटो हिँड्ने जमर्को हामी जोईपोईले गर्यौं । नयाँ ठाउँमा आएपछि हिँडेर नै ठाउँ हेरिन्छ भन्ने मेरो मान्यतालाई उनलेपनि साथ दिईन् । गर्मीको तापले पोलेपनि हामी हिँड्यौँ । बाटोमा व्यवस्थित र योजना मुताबिकका घरहरु बनेको बस्ती देख्दा मलाई पोखरा काठमाण्डौँ भन्दा धेरै नै व्यवस्थित लाग्यो । जथाभावी कुनै अगाडि र पछाडी नबनाईएका, बाटोलागी मनग्य जग्गा छोडिएका अनि सफा र सुग्घर लाग्यो पोखरा । काठमाण्डौँले सिक्नुपर्ने हो यस्तो शिक्षा । तर न काठमाण्डौँबाट पोखराले पो सिकेर आफुलाई यति व्यवस्थित बनाएको हो कि भन्नेपनि लाग्यो ।
जे होस् सँग्रहालयको टिकट काउण्टर पुगेपछि थाहा भयो विदेशी र स्वदेशीको अलग अलग दर रहेछ । थाहा भएपनि यो कुरा मैले विर्सिसकेको रहेछु । भारतीय र सार्क मुलुककोलागी अर्कै दर रहेछ । आफु कागजमा विदेशी भएपनि स्वदेशीको रकम तिरेर भित्र पसियो । ५.१० हेक्टरमा फैलिएको यो सँग्रहालयको शिलान्यास सन् १९९५ भएर सन् २००४ देखि प्रदर्शनकोलागी खोलिएको रहेछ । भित्र पर्वतारोहरण सम्बन्धि विशाल प्रदर्शन रहेछ । एक एक हेर्न निकै समय लाग्ने । त्यसकारण आँखाले जताजता भ्यायो उतैउतै हेरेपछि डकुमेण्ट्र् िदेखाउने एउटा हलमा पुग्यौ र सो हेर्यौं । डकुमेण्ट्रि सिद्धिएपछिको उज्यालोमा मैले तीनचार जना अमेरिकी जस्ता देखिने विदेशी देखेँ । मलाई उनीहरुसँग बोल्न आतुरीले च्याप्यो । मलाई लाग्यो हामी एकै देशका वासिन्दा हौँ र नेपालमा भेटदै छौं । मानौं म घरदेश छोडेर परदेशमा छु | त्यसैले किन हो कुन्नी एकप्रकारको खुशी भएजस्तै मन आल्हादित भयो । गएर परिचय गर्दै कुरा गरेँ । नभन्दै अमेरिकाको ओहायोका रहेछन् । नेपालमा स्वयँसेवी भएर काम गर्दै रहेछन् । तर उनीहरुले मैले अनुभव गरेजस्तो अनुभव गरेको देखिनँ । गर्थेपनि किन र? छाला र अनुहार नै फरक छ । उनीहरुकोलागी म त स्थानिय नै हुँ । जुन स्वाभाविक नै थियो ।
उनीहरु स्वयँसेवी भएको कुरा सुनेपछि मलाई एउटा कुरा खट्कियो । त्यो के भने यि सहृदयी विदेशीहरु नेपालकोलागी भनेर आफ्नो थातथलो छोडेर आएका छन् । तर नेपालमा उनिहरुले टिकट काट्नुपर्दा भने विदेशी भएर पैसा तिर्नुपर्छ । मलाई यो न्यायसँगत लागेन । के उनीहरुलाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर नेपाली सरह वा कमसेकम सार्क मुलुक सरहको टिकट लाग्ने व्यवस्था गरे हुन्न ? यसो गर्दा उनीहरु आफुले गरेको योगदानको मूल्याँकन भएको ठान्नेछन् भने अर्कातिर नेपाल सरकार र नेपालीको उदारमनापनि उजागर हुने थियो । तर यो सम्भव होला ?
त्यहाँबाट अब गर्नुपर्नु र हेर्नुपर्ने सबै सकिएको अनुभव गर्दै फेरी हिँडेर नै फर्कियौँ । अलिकति समय भएकोले अब यताका साहित्यकारहरुसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । पोखरा घर भएको र मैले चिनेको साहित्यकारमा एकजनाकोमात्र नाम सम्झेँ सरुभक्त । तर फोन नम्बर छैन । उनलाई अमेरिकामा मालती मँगलेको टोली नेता भएर आउँदा भेटेको थिएँ । साह्रै फरासिला र हँसिला फुर्तिला लागेका थिए । अब फोन नम्बर कसरी लिने त भन्ने धुनमा काठमाण्डौँमा रहेकी कथाकार बहिनी शर्मीला खड्का दाहाललाई फोन गरेँ । ला..छैन पो रहेछ । उनले 'खोई अरु कोसँग होला दाजु' भनेर अनभिज्ञता प्रकट गरिन् । खल्लो मन बनाएर फोन राखेँ । काठमाण्डौँ फर्किएको केहि दिनपछि साहित्यकार तथा समालोचक बहिनी गीत त्रिपाठीसँग कुरा हुँदा पो थाहा पाएँ तिनी त त्यस बखत पोखरामा नै रहिछन् । त्योपनि सरुभक्तकै नेतृत्वमा भएको साहित्यिक कार्यक्रममा सहभागी हुन । ठुलो अवसर हातबाट उम्केको अनुभव गरेँ। यसरी सरुलाई त भेटिएन, बरु उनको सम्झनामा नै चित्त बुझाउन परेको थियो ।
अब भोलीपल्ट बिहान काठमाण्डौ फर्किने भएकोले नथाकिनकोलागी हामी कोठातिरै लाग्यौँ । महेश आएपछि फेरी एकछिन बाहिर घुमेर रातीको खाना खाएपछि गुँडमा नै फर्कियौँ र निगमका पुराना बेलीविस्तारका कुरा गरेर सुत्यौँ ।
बिहान उठ्नु अगाडि नै कल्याँगमल्याँग आदिको आवाज सुनिएको थियो तर यो आवाज छिमेकीबाट आएको होला भन्ने लाग्यो । उठेर नुहाईवरी निस्किँदा महेश त भान्सामा हाम्रालागी खान्तेपिन्तेको पो बन्दोबस्त गर्न लागेका रहेछन् । अण्डा उमालेर, दुध तताएर, फलफूल काटेर ठिक्क पार्न लागेका रहेछन् । हे महेश, किन यति झण्झट गरेको होला भन्दै पिरतीको स्वरमा हकारेको त उल्टै उहि पो मेरै नक्कल गर्दै मलाई नै हकार्छ । माया, प्रेम सद्भावमा महेशले जित्यो । बस्न दियो, सेवा सुश्रुषा गर्यो । धन्न महेश !
बस स्टपसम्म जानकोलागी ट्याक्सी लिने जोहो गरेनौँ । मीटर नै नभएको ट्याक्सीमा केको आधारमा भाडा तिर्ने? मनलागी भनेको भाडा तिरेर ट्याक्सी चढ्न मनले मानेन । त्यसमाथि हतारपनि थिएन । समय प्रशस्त भएकोले सुटकेस घ्यारार्र पार्दै बस स्टपतिर लाग्यौँ र बस काठमाण्डौँतिर लाग्यो । बस गुडेपछिपनि दाँयाबाँया माछापुच्छ्रेको दर्शन पाईएला कि भनेर हेरेँ । तर अहँ पहिलो पटक पोखरा आएको मलाई उनले निराश बनाएर रित्तै हात फर्काईन् । पोखरा प्रवेश गरेदेखि बादलको घुम्टोमा माछापुच्छ्रे लुकेर बसेको बस्यै गरिन् । मचाहिँ बेहुली हेर्न जाँदा बेहुलीको मुख नै नदेखी फर्किन परेको अवस्थामा झैँ थिएँ । त्यसैले मेरो आँखामा उनीप्रतिको तिर्षना अझै ताजै छ । अब यो तिर्षना कहिले मेटिने हो भविष्यलाई नै थाहा होला ।